अब सात मुलुकबाट मात्र ४ लाख नेपाली फर्किं`दै, यस्तो छ तिनलाई ल्याउने योजना !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/अब सात मुलुकबाट मात्र ४ लाख नेपाली फर्किं`दै, यस्तो छ तिनलाई ल्याउने योजना !!
कोरोना भाइरस म हामा`रीका कारण वैदेशिक रोजगारी`को प्रमुख गन्तव्य मानिएका सात मुलुक बाट मात्र ४ लाखभन्दा बढी नेपालीले स्वदेश फर्किने चाहना व्यक्त गरेका छन्। सर`कारले उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउने कार्ययोजना पनि तयार गरेको छ।
कतिपय गन्त`व्य मुलुकले त्यहाँ रहेका नेपाली श्र`मिक फिर्ता गर्न नेपाल सरका`रलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसैले श्रम, रो`जगार तथा सामा`जिक सु`रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले उनी`हरुलाई फिर्ता गर्ने कार्य`योजना बना`एका छन्। सो योजना माथि अहिले कोभिड–१९ रोक`थाम उच्च स्तरीय समितिमा छलफल भइरहेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रमुख गन्तव्य मुलु`कबाट मात्रै रोजगार गुमाए`का ४ लाख ७ हजार नेपाली स्वदेश फर्किने आ`कलन गरिएको छ। सम्ब`न्धित मु`लुकमा रहेका नेपाली दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी कतारबाट फर्किने आकलन गरिएको छ। कतारमा ३ लाख ५१ हजार ८ सय ७२ जना श्रमिक रहेकोमा एक लाख ४५ हजार फर्किने दूतावासको अनुमान छ।
मलेसियाबाट भिसाको म्याद सकि`एको र आम`माफी पाएका ७ हजार श्रमिक फर्किने छन्। ३० हजारले त्यहाँ रोजगारी गुमाउने दूता`वासको आ`कलन छ। यू`ए`ई`मा २ लाख ७५ हजार र मलेसि`यामा ३ लाख २५ हजार श्रमिक कार्यरत छन्।यस्तै कुवेत, बहराइन, र ओमानबाट पनि ठूलो संख्यामा नेपाली फर्किने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई १० भागमा वर्गीकरण गरेर फर्काउने प्राथमिकता निर्धा`रण गरिएको श्रम मन्त्रा`लय स्रोतले बतायो।श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई समेत ६ भागका वर्गीकरण गरिएको छ।पहिलो चर`णमा श्रम स्वीकृति÷करार अवधि समा`प्त भई नेपाल फर्कन तयार भएका तर लकडाउनका कारण विदेशमा अड्किएका श्रमिकलाई फर्काइने छ !
श्रम स्वीकृति लिएको कम्पनी छाडी अन्यत्र रोजगारमा रही गन्तव्य मुलुकमा गैरकानूनी हैसियतमा रही फर्कन चाहेनेहरु र श्रम स्वीकृति तथा करारको म्याद समाप्त भई रोजगारदाता मुलुकमा अवैधानिक तवरबाट काम गरिरहेका र वर्तमान परिस्थितिमा अलपत्र परी वा आममाफीका कारण स्वदेश फर्किनेहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर फर्काउनु पर्ने कार्ययो`जनामा उल्लेख छ।श्रम अवधि भित्र रहेका, रोजगारीमा समस्या नभए पनि वर्तमान अवस्थामा स्वेच्छाले रोजगारी छाडी स्वदेश फर्कनेहरुलाई भने पछिल्लो प्राथमि`कतामा राखिएको छ।
नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन नेपाल र सम्बन्धित देशमा संयन्त्र तयार गरिने भएको छ। नेपालमा विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्याल`यलाई समेटेर स्वदेश फिर्ता व्यवस्थापन समिति बनाइने भएको छ। समितिमा श्रम, परराष्ट्र, गृह, पर्यटन, स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहनेछन्।यस्तै वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र वैदेशिक रोजगार व्यव`सायी संघ समेत समितिमा रहनेछन्।स्वदेश फिर्ता व्यवस्था पन समितिले गन्तव्य देशका नियोगहरुसँग नियमित सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने र श्रमिक ल्याइने देश तथा श्रमिक`हरुको छनोट र मापदण्ड तयार गर्नेछ।